गर्भको छोरी तुहाउने, चाडबाडमा चेली चाहिने ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २३, २०७३ समय: १८:४४:०५
एक सहकर्मी गर्भवती थिइन् । उनलाई डाक्टरले बडादशैंको फूलपातीको दिन आमा बन्ने समय तोकिदिएका थिए । उनी भने आफ्नै खालको पिरलोमा थिइन् । उनी भगवानसँग पूकारा गर्थिन्, ‘मेरो पहिलो बच्चा छोरा नै होस्, छोरी जन्मियो भने त फेरि अर्को बच्चा जन्माउनैपर्छ ।’ काठमाडौंको पढेलेखेको परिवारकी बुहारी भए पनि परिवारमा नातिकै चाहना थियो । ८४ वर्ष पुगेकी जिजु हजुरआमा समेत पनातिको मुख हेरेर स्वर्ग जाने बताइरहन्थिन् । अझ उनकी सासूले त बुहारीले पक्कै नाति नै जन्माउँछे भन्दै सपनामा यस्तो देखेँ, उस्तो देखेँ भनेर सुनाइरहन्थिन् ।
मेरा त दुई वटै छोरीले छोरा पाएका छन्, छोराको पनि छोरै जन्मिन्छ’, छिमेकी र आफन्तसँग सासूको यस्तै संवाद हुन्थ्यो । बच्चा जन्मनासाथै नयाँ लुगा लगाउन हुँदैन भनेर उनले नन्दका छोरा (भान्जा) लाई साना भएका कपडा पोको पारेर राखिसकेकी थिइन् । यता साथी भने घरमा छोराको भूत चढेको देखेर आत्तिएकी थिइन् । बच्चा जन्मने दिन नजिकिँदै जाँदा उनको मुटुको ढुकढुकी बढिरहेको थियो ।
काठमाडौं बाहिर घर हुने हामी दशैंमा घर गयौं । पूणिर्मापछि कार्यालय जाँदा थाहा भयो, उनी त फूलपातीकै दिन छोरीकी आमा बनिछन् । पहिलो पटक आमा बने पनि उनले कसैसँग पनि खुसी साटिनन्, सम्पर्कमै रहिनन् । सानो कुरामा पनि फुरुंग हुँदै फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्ने साथीका श्रीमानले पनि अझैसम्म कुनै स्टाटस पोस्ट गरेका देखिँदैथे । आमा बनेकी साथीको अत्तोपत्तो थिएन । सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल अफ थियो । कोही आफन्तले उनको फेसबुक एकाउन्टमा छोरीको सुन्दर फोटो ट्याग गरिदिएको थियो, कमेन्टको ओइरो थियो । तर, खास खुसी हुनुपर्नेहरु खुसी थिएनन् ।
धेरै प्रयासमा साथीसँग फोन सम्पर्क भएपछि बधाई दिएँ । तर, उनले कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् । किन नबोलेकी भने दोस्रो प्रश्न गरेपछि बल्ल उनी बोलिन्, ‘के को बधाई साथी ? एकातिर दशैं रोकियो, आफन्तले टीका लगाउन पाएनन् । अर्कातिर छोरी जन्मिई ।’ उनी छोरीको आमा भएकोमा आफूलाई अभागी मानिरहेकी थिइन् र पंक्तिकार छोराकी आमा भएकोमा निकै भाग्यमानी ठानिरहेकी थिइन् ।
राजधानीकै स्थायी बासिन्दा एकजना चिनजानकै दिदी छन्, उनको पहिलो बच्चा पाँच वर्षकी छोरी छ । दोस्रो बच्चा उनले छोरा नै जन्माउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि उनले तीन पटकसम्म गर्भपतन गराइसकेकी रहिछन् । उनले पीडा सुनाइन्, ‘एउटा छोरा भइदिएको भए यत्रो सास्ती हुने थिएन । तीन पटकसम्म पाठेघर सफा गर्दा लखतरान भइसकेँ । अचेल त उठ्दा-बस्दा पनि खुइयय हुन्छ !’
मन चसक्क भयो । कति सम्पन्न छ उनको घरपरिवार । सबै जना पढेलेखेका छन् । तैपनि मानसिकतामा सबै गरिब रहेछन् । ती दिदीले ‘सम्पत्ति खाने नाति खलकै हुने भएन’, ‘एउटा नातिको मुख नहेरी मरे अगति परिन्छ रे’ भन्ने जस्ता कुरा निरन्तर सुन्नुपरेर तनाव खेप्नुपर्छ ।सासू-ससुराले सानी पाँच वर्षीया नातिनीलाई सधैं भन्दा रहेछन्, ‘तेरो भाइ कहिले आउँछ नानी ? भाइको नाम के राख्छेस् ? तिहारमा भाइलाई टीका लाउँथिस् होला, खै तेरी आमाले कहिले भाइ पाउने हो ।’
हजुरबा-आमाको यस्ता प्रश्नले छोरीले समेत आमालाई सोध्न थालिछे, ‘मामु मलाई भाइ खै त ? भाइ कहिले ल्याइदिने हो ?’ सबैतिरबाट एउटै कुराको करकरले दिदी आजकाल डिप्रेसनमा रहिछन् । औषधि नै खान थालिछिन् । प्रेसरको समस्या पनि छँदै छ ।
महिलाको ज्यानलाई बच्चाको लिंग पहिचानको लागि पटकपटक प्रयोगशाला बनाइएको छ । संविधानमा प्रजनन अधिकारमा महिलाको हक हुने व्यवस्था छ । तर, सामाजिक व्यवहारमा भने लिंग पहिचानपछि छोरा जन्माउने जिम्मेवारी मात्र दिए झैं देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाले कहिलेसम्म रहनुपर्ने हो ?-साझापेजबाट साभार